आज हामी तपाईंलाई Alexei Zemsky छ जो देखाउने छौँ। "NTV" - मा 2015 हाम्रो नायक निर्देशक रूपमा लियो जसमा एक प्रसारकले। उहाँले पनि थिएटर र फिल्म अभिनेता, निर्माता, प्रस्तोता र मिडिया व्यवस्थापकलाई छ।
Zemskiy Aleksey Vladimirovich 11 अक्टोबर मा, 1967 मा जन्म भएको थियो। मास्को मा जन्म। आफ्नो आमाबाबु - तातियाना व्लादिमीर Naumovich र एस .. 1984 मा उनले GITIS प्रविष्ट गर्नुभयो। उहाँले संकाय अभिनय को एक विद्यार्थी भयो। उहाँले कार्यशाला उपस्थित व्लादिमीर एन्ड्रीव। प्रशिक्षण एक ब्रेक लाग्यो। सैनिक सेवा बित्यो। उहाँले स्कूल फर्के र एक कार्यशाला धाउन थाले Yevgeny Lazarev। उहाँले यूजीन Tashkova को स्टुडियो मा अध्ययन 1994-1996 मा 1991. मा स्नातक। त्यसपछि उहाँले VGIK एस ए Gerasimova मा एक विद्यार्थी विभाग निर्देशन छनौट थियो।
हाम्रो नायक उहाँले एक विद्यार्थी थियो त्यतिबेला 1986. सुविधा फिलिमहरु खेल्न थाले। उहाँले ज्यादातर बिट भागहरु पस्त। 1991 सम्म, त्यो मास्को थिएटर एन वी Gogolya को निर्माण, साथै प्ले "Satyricon।" 1991 मा उनले नाम "Figaro स्टुडियो" अन्तर्गत कम्पनी को संस्थापक मध्ये एक भए। कम्पनी रूसी च्यानलहरू लागि टेलिभिजन र विज्ञापन परियोजनाहरू उत्पादन भएको छ। 1992 मा, "पहिलो च्यानल Ostankino" अग्रणी मनोरञ्जन कार्यक्रम थियो "Munchausen क्लब।" "राम्रो गर्न Hasten", "बारे त्यो", "स्वास्थ्य र जीवन", "Coma," "गोधूलि," "Domino सिद्धान्त": एक निर्देशक र निर्माता रूपमा उहाँले निम्न कार्यक्रम सिर्जना गरियो। उहाँले "स्वर्ण Gramophone" पुरस्कार को एक टेलिभिजन संस्करण सिर्जना गरियो। उहाँले "पहिलो च्यानल मा नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्या" कार्यक्रम मा काम गरे। परियोजना "व्लादिमीर पुटिन संग प्रत्यक्ष रेखा" को तयारी को कार्यकारी निर्माता, साथै अन्य घटनाहरू रूसी संघ को जो राष्ट्रपति छ। उहाँले Jurmala मा "नयाँ लहर" हकदार प्रतियोगिता को आयोजकहरु बीच थियो।
2003 मा, निर्णय Sienkiewicz को "NTV" प्रसारण को पहिलो उप निर्देशक नियुक्त। यो च्यानल बोर्ड मा निर्णय नकारात्मक प्रतिक्रिया। जडान टिभी र आफ्नो भविष्य काम Alexei Zemsky संग। "RTR" - उहाँले 2008 मा काम गर्न थालिन् जसमा एक कम्पनी। उहाँले नियुक्त गरियो उप महानिर्देशक र उत्पादन को हेड र प्रविधि विभाग। 2010 मा, राष्ट्रपति प्रशासन प्रस्ताव को आधार मा, हाम्रो नायक कार्यक्रम महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध मा विजय को 65th वार्षिकोत्सव समर्पित को संगठनको लागि समूहमा समावेश गरिएको थियो। HD यस-2010 मा शूटिंग र प्रसारण गरेको यो मानिसको डोऱ्याइमा, लाल वर्ग मा भयो जो सैन्य परेड। विशेष पत्रिका को एक नम्बर परियोजना एक विशाल टेलिभिजन घटना, समय मा कुनै analogues थियो जो मा हुर्केका छ उल्लेख गरे। साथै, एउटा प्रयोगात्मक सर्वेक्षण परेड, मानक तीन आयोमी टेलिभिजन अनुसार भएको थियो। 2012 मा, को "रूस HD» मुख्य मा सम्पादक Alexei Zemsky थियो। "RTR" - टिभी कार्यक्रम र च्यानलहरूको कार्यक्रम ग्रिड गठन जो फिलिमहरु को आधार मा समातेर, तर छवि उहाँलाई लागि HD-ढाँचामा अनुवाद भएको थियो। 2014 मा, हाम्रो नायक "परिप्रेक्ष्य" एनजीओ सिर्जना सुरु भएको छ। परियोजना विशेष सफ्टवेयर र प्रसारण उपकरण को रूसी निर्माताहरु को एकीकरण केन्द्रित। अखबार अनुसार "Vedomosti" Alexei Zemsky विचार procession को मुख्य लेखक मास्को मा मई9मा भयो जो "अमर रेजिमेन्ट" हकदार कार्य, प्रसारण छ। यो परियोजना "Taffy-2015" जित्यो। 2015 मा, निर्देशक को बोर्ड को "Gazprom-मिडिया होल्डिंग" निर्णय "NTV" को निर्देशक जनरल को पोस्ट गर्न नियुक्त गरियो। तसर्थ, उहाँले द्वारा सफल भएको थियो व्लादिमीर Kulistikova, 2004 देखि च्यानल नेतृत्व गर्ने।
Alexei Zemsky निम्न चलचित्रमा तारा अङ्कित: "पहिलो मानिस", "कसले बस्छ धैर्य को बाउल,", "सोफिया Petrovna", "जनावरको उपनाम।" साथै, हाम्रो नायक सक्रिय एक निर्माता रूपमा बढुवा गरेको छ। यो क्षमता मा, त्यो कला र टेलिभिजन चित्र, टिभी श्रृंखला सिर्जना मा भाग। यी कामहरू केही अन्तर्राष्ट्रिय र रूसी फिलिम चाडहरूमा र फोरम मा पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। एक उहाँले निम्न बैंड मा काम निर्माता रूपमा: "एक प्रेम को यात्रा र साहसिक" "पागल दिन वा Figaro को विवाह", "नौ Unknowns", "पछिल्लो अभिभावक", "एक lusty, वा भव्य चार", "जेल। ", Fedor Sechenov सम्झौता" धनी र मनपर्ने "," बनाउन "," आकर्षण "," लडाकू। एक पौराणिक कथा को जन्म, "" कार्यकारी निर्णय! सञ्चालन: चिनियाँ बक्स "," स्वर्ग "," Nakhodka "," Sevastopol Waltz "।
Alexei Zemsky पार्टी IATR छ। को एनजीओ "MMR देखि" मा भाग। सलाहकार परिषद पुरस्कार व्लादिमीर Zworykin NAT छ। 2013 मा उहाँले ओलम्पिक खेल 2014 को लागि torchbearer भयो।
पुरस्कार र Prizes
Alexei Zemsky "मेरिट लागि" आदेश मालिक छ। उहाँले को पदक प्राप्त "सिरियाको सैन्य सञ्चालन सहभागी।" अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरू मा सहभागिता को लागि रूस को राष्ट्रपति को कृतज्ञता पुरस्कृत गरियो। उहाँले प्राप्त एक मानार्थ उपाधि रूसी संघ को। सम्मानित «TKT पुरस्कार 2015"।
बुल्सआइ (Marvel): इतिहास। श्रेणीमा लेबल "Daredevil"
"Zolotaya Korona" सिस्टम मार्फत जरुरी पैसा स्थानान्तरण। म कहाँ प्राप्त गर्न सक्छन्?
रूसी राजनीतिक वैज्ञानिक Elena Ponomareva
KUBAN चरा: फोटो र विवरण
थाहा राम्रो: तिनीहरूले के पिउन देखि कि?
प्याज लेक (Noginsk जिल्ला, मास्को क्षेत्र): विश्राम, माछा मार्ने
RGPU। Herzen संकाय। Herzen राज्य शैक्षणिक विश्वविद्यालय रूस (सेन्ट पीटर्सबर्ग)
दार्शनिक शिक्षाहरू व्यावहारिक अवधारणाबाट: नैतिकता ...
विवाहको लागि एक उपहार। नवविद्यार्थीहरूलाई के गर्ने?
एक केटी मन कसरी जीत
"Angiovit": प्रयोगको लागि निर्देशन